Sida loo Undelete Videos on iPod taabashada
> Resource > iPod > Sida loo Undelete iPod xiriiri Videos
Waxaan undelete karaa video ka iPod taabto?
My saaxiib ugu fiican, waa markii ugu horeysay ee isaga u isticmaali iPod taabto, si qalad ah tirtiray oo dhan cajallado uu warqad. Ma uusan u isticmaali Lugood, si aanay jirin files gurmad. Videos waa kuwa soo jiidasho leh oo muhiim ah, waana uu i weydiistay inaan caawiyo. Sow ma waxaa run ahaantii si ay u undelete video ka iPod taabto?
Haddii saaxiibkaa ee ma laha gurmad Lugood, sida kaliya ee uu u isticmaali karo waa in undelete videos si toos ah uga soo iPod taabto. Currently, Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery) iyo Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) (Windows) (macruufka 9 taageeray) waa xog iPhone software qalab kabashada ugu horreeya adduunka ee. Waxa ay isku halayn karo oo lagu aamini karo. Waxaad u isticmaali kartaa si undelete video ka iPod xiriiri 4 dhammaataan, laakiin iPod xiriiri 5, waxaad u baahan tahay gurmad ah Lugood file hore.
Download ku version DHAGAYSIGA FREE hoose si aad u leeyihiin isku day ah. Waa ammaan in la isticmaalo Wondershare Dr.Fone oo waxba ma yeeli doonaa qalab aad at dhan.
Video Undelete on iPod xiriiri in tallaabooyinka
Tallaabada 1. Isku aad iPod xiriiri in kombiyuutarka
Halkan, aynu isku dayi Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Windows). Haddii aad tahay qof user Mac ah, waxa kale oo aad kala socon kartaa in ay qaadaan tallaabooyin la mid ah.
Connect aad iPod taabto si computer iyo ordi barnaamijka. Markaas waxaad heli doontaa daaqadaha aasaasiga ah sida soo socota.
Fiiro gaar ah: Hubi in aad leedahay Lugood dambeeyay lagu rakibay on your computer, laakiin ha u ordaan marka aad isticmaalayso Wondershare Dr.Fone ee macruufka.
Wixii iPod xiriiri 4:
Haddii aad doorato inuu ka soo kabsado videos kaga imaanayo Lugood, waxaad dooran bogsan karaan Lugood ee kaabta File dusheeda. Dooro faylka gurmad u ah iPod xiriiri 5/4, oo guji Start Scan si ay u soo saaro.
Tallaabada 2. Sawirka aad iPod taabashada
Ka hor inta aadan baarista iPod xiriiri 4 ilaa undelete iPod xiriiri video, aad u baahan tahay si aad u hesho hab iskaanka ay hore. Waa mid aad u fudud, oo waxba ma yeeli doono oo dhan iPod taabto. Just raac tilmaan-hoose si ay u sameeyaan.
Hay iPod taabto oo ka jaftaa button Start ee interface ee Dr.Fone.
Saxaafadda Power iyo badhamada "Home" aad iPod xiriiri waqti isku mid ah ee saxda ah 10 ilbiriqsi. Software tirin doonaa wakhti aad.
Marka aad si guul leh ku soo gashay hab iskaanka ah, barnaamijka si toos ah iskaan doonaa iPod xiriiri ahaantiisa. Wakhtigan, aad iPod xiriiri beddeli doonaa madow. Wax macno ah ma. Waxaad u soo celin kartaa si caadi ah ka dib markii uu dib u soo kabashada.
Tallaabada 3. Undelete iPod xiriiri video
Marka sawirka dhameystiray, barnaamijka ay abuuri doonaan warbixin aad u. Halkan waxaad ka hubsan kartaa dhammaan xogta recoverable, oo ay ku jiraan xiriiro, sawiro, fariimaha, qoraalo, iwm Sida ay u videos, waxaad ka heli kartaa qaybta ka ah Roll Camera. Calaameeyey oo guji bogsadaan. Markaas waxaad iyaga ku daawan kartaa on your computer hadda.